प्रोप्रोमिटर: तपाईंको वेबक्यामको साथ आँखा सम्पर्क बनाउने | Martech Zone
बिहीबार, मे 2, 2013 शनिबार, डिसेम्बर 5, 2015 Douglas Karr
आँखा सम्पर्क बनाउने महत्वपूर्ण छ जब तपाईं आफ्नो क्यामेरा प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ। केटा कावासाकी उनी कसरी साझेदारी गर्दै थिए उसको मोनिटरको अगाडि ट्राइपडमा उसको वेब क्यामेरा राख्छ ताकि जब उनी ह्या hang्गआउट्समा व्यक्तिहरूसँग बोल्दै छन् भने यो सहज नै छ। गुगलको स्कट एटवुड चीजहरू धेरै सजिलो बनाउनको लागि एउटा डरलाग्दो साना उपकरणमा चेइम र इशारा।
प्रोप्रोमिटर डेस्कटप एक पेरिस्कोप जस्तो उपकरण हो जुन तपाईं आफ्नो ल्यापटप वा डेस्कटप मोनिटरमा चढ्न सक्नुहुनेछ जुन तपाईंको क्यामेरा दृष्टि स्क्रिनको माथिबाट तपाईं हेरिरहनुभएको ठाउँमा पुनःनिर्देशन गर्दछ। चाहे तपाईं टेलिप्रोमिटर अनुप्रयोग चलाउँदै हुनुहुन्छ वा भिडियोमा कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईं केवल उपकरणको सिमाना भित्र विन्डो स्थित गर्नुहुन्छ।
अब तपाईं भिडियो रेकर्ड गर्न सक्नुहुन्छ वा भिडियो सत्रहरू होल्ड गर्न सक्नुहुन्छ जहाँ तपाईं आफ्नो दर्शकहरूसँग आँखा सम्पर्क बनाउँदै हुनुहुन्छ!
टैग: बोडेलिनआँखामा आँखाप्रोप्रोमिटरseeeye2eyeहेर्नुहोसTeleprompterवेब क्यामेरा
सामाजिक विज्ञापन खर्च पूर्वानुमान
मई 3, 2013 मा 10: 57 एएम
"SeeEye2Eye … स्क्रिनको माथिबाट तपाइँले हेर्दै गरेको ठाउँमा तपाइँको क्यामेराको दृष्टि रिडिरेक्ट गर्दछ।"
वास्तवमा, यस्तो देखिन्छ कि यसले व्यक्तिको भिडियो छविलाई मिरर गर्छ जससँग तपाईंले भिडियो-संचार गरिरहनु भएको छ र तपाईंको आफ्नै क्यामेराको अगाडि मिरर दृश्य प्रस्तुत गर्दछ। त्यसोभए तपाईले मिरर गरिएको छविलाई हेर्नुहुन्छ, तपाईको नजर तपाईको क्यामेरा तर्फ बढी लक्ष्यमा हुन्छ। जबसम्म म कुराहरू गलत बुझ्दै छु। 🙂
मई 3, 2013 मा 11: 00 एएम
तपाईं सहि हुन सक्नुहुन्छ @markfrisk:disqus ! म एउटा प्राप्त गर्न र यसलाई बाहिर प्रयास गर्न अगाडि हेर्दै छु !!!
मई 14, 2017 मा 3: 23 PM
डगलस, तपाईंले गर्नुभयो?
मई 17, 2017 मा 10: 58 PM
इमानदारीपूर्वक, छैन। मलाई वास्तवमा पोडकास्ट वा भिडियो मार्फत मेरो कुनै पनि कुराकानी अनलाइन स्क्रिप्ट गर्न मन पर्दैन। यो मलाई प्राकृतिक "महसुस" गर्दैन।
मई 6, 2013 मा 3: 38 PM
मेरो कम्पनीले प्रवक्ता भिडियो बनाउँछ (http://www.liveonpage.com)। हामीले यो गरिरहनुभएको6वर्ष, हामी एक मात्र कम्पनी हो जसले ग्राहकहरूलाई आधा-शरीर प्रस्तुतीकरणहरू प्रयोग गर्न भन्छ। कारण बनाइएको आँखा सम्पर्क हो। हामीले रूपान्तरण दरहरू, हेराइको समय र बाउन्स दरहरू सबैले आँखा-सम्पर्कले फरक पार्छ भनेर देखाउँछ। पूर्ण शरीर मूलतः एक नौटंकी हो। हामीले टाउकोदेखि खुट्टासम्म गोली हानेको मात्रै समय हो जब कोही कोठामा हुन्छ, र त्यसैले हामी तिनीहरूलाई बेवास्ता गर्छौं।